I-Fenix ​​OS: ukubukeka kwe-MacOS neWindows Made eSpain | Kusuka kuLinux
Mhlawumbe awungabazi ngokwenza i-GNU / Linux futhi awutholi ukusatshalaliswa okufanelekile. Ngaphezu kwalokho, ungahle uthande ukujabulela konke okuhle kakhulu emhlabeni weLinux, kepha ngaphandle kokuyeka isici sokuqhafaza seWindows noma iMacOS. Uma kunjalo I-Fenix ​​OS ngenye yamaphrojekthi angakulethela okuhle kakhulu kohlelo ngalunye ...
Futhi, le chameleon distro iyi Yenziwe eSpain, futhi isebenzisa Ubuntu njengesisekelo. Ngakho-ke, inesisekelo esiqinile, ukuqina, ukuphepha nokuqina. Ngaphezu kwenani elikhulu lamaphakeji atholakalayo we-Canonical distro nokusekelwa okuhle komshayeli ngakho ukuhambisana kwehardware akuyona inkinga.
Ngiyazi ukuthi sekuvele kukhona amanye amaphrojekthi elingisa ukubukeka kwe-macOS, okufana ne-OS yokuqala, noma amanye amaphrojekthi afana neZorin OS yokulingisa iWindows, kanye neLinspire enempikiswano, kanye namaphrojekthi we-SBC Raspberry Pi anjenge iRaspbian neRaspbian X. Futhi kunezindikimba eziningi ongazisebenzisa "ukushuna" ideskithophu yakho futhi uyenze ibukeke njenganoma yini oyifunayo ...
Ungakwazi cabanga ukuthi i-Fenix ​​OS ayilethi lutho olusha, kepha wena unephutha. Umqondo wale distro ukwazi ukuzivumelanisa nokuthola ukubukeka okufunayo njengokungathi kungunwabu. Ungabeka ukubukeka kwe-macOS (X ne-classic), noma ngezinguqulo ezahlukahlukene zepulatifomu ye-Microsoft, kusuka ku-Windows 95, kuye ku-Windows 10, nge-XP edumile, 7, njll.
Ezinye izici ze-Fenix ​​OS
Ngaphezu kokubukeka okuphendulayo, i-Fenix ​​OS nayo yakhelwe ukusebenza kahle ngamabhodi womama. Ukusajingijolo Pi. Inokusetshenziswa kuphela kwe-1 GB RAM, futhi ivumelane nokwakhiwa kwe-ARM yamachips ayo.
Inezinhlobo eziningi ze- amaphakheji yesoftware efakwe ngaphambili, njengeLibreOffice, i-Openshot, i-Audacity, i-Inkscape, iklayenti leTelegram, njll, kanye nezinye ezingafakwanga ngokwakhona njenge-Kodi, i-RetroPie, ...
Uye snap yokuphathwa kwephakeji.
Kufaka phakathi umsizi wakho kanye nefayela le- i-emulator ye-Android ebizwa nge-AndEmu, ukuze ukwazi ukusebenzisa zonke izinhlelo zokusebenza nemidlalo yevidiyo yohlelo lwe-Google ku-distro yakho.
Izindawo eziningi zedeskithophu ongakhetha kuzo. I-Fenix ​​OS ingalandwa ezithombeni nge I-XFCE, iCinnamon, i-LXDE ne-Openbox. Kubandakanya izingqikithi zokulingisa iWindows ne-MacOS.
Kutholakala ngezilimi eziningi, kufaka phakathi iSpanishil.
Uma uyithandile, ungathola eminye imininingwane noma ubuke amavidiyo nezithombe ezibonisa amathuba okushintsha ukubukeka kwifayela le- iwebhusayithi esemthethweni yephrojekthi. Ngaphezu kwalokho, unga ukulanda izithombe zilungele ukufakwa ku-SD, noma uzisebenzise ngaphandle kokufaka noma yini lapho ufuna khona ...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-Fenix ​​OS: ukubukeka kwe-MacOS neWindows Made eSpain
I-athikili enhle kakhulu, kepha ngale kokubukeka bengizogcizelela kakhulu iqiniso lokuthi inetheku lobuntu obambisene ne-gnome ye-pi 4, ngoba okwamanje akekho umuntu womlingani walokho futhi akukho lutho olunobunono okusajingijolo. Noma ngeqiniso lokuthi okusajingijolo kuyakwazi ukuhambisa leyo miphumela yewindi exegayo ... ngaphandle kokucwayiza, noma ukuthi i-KDE idla i-500mb yenqama futhi ihambe kahle lapho ngine-gentoo kde edonsa imemori ebonakalayo futhi ene-overuls ngoba kungenjalo iyasebenza.
ULaura Sancho Garcia kusho
Kuhle kakhulu, bengingakaze ngibone noma iyiphi i-distro noma iyiphi ingqikithi enaleso sici ephumelela kangaka, ngize ngenza iphutha futhi ngikholelwa ukuthi ngisebenzisa i-pc yami futhi bengivele ngikhala ngoba bengicabanga ukuthi amafayela wami asusiwe. Kade ngiyivivinya izinsuku ezimbili futhi isebenza kahle kakhulu ku-2gb Raspberry 4 yami. Ngaphambi kokuthi ngifudumise ikhanda lami ukufaka izinto, manje nginakho konke engikudingayo futhi uma kukhona okushodayo ngingakufaka kalula, ngicabanga ukuthi ngeke ngisadinga i-Windows pc yami, iLinux yinhle.
Phendula uLaura Sancho García
I-WireGuard iyaqhubeka nokuyiphula, manje sekuyi-OpenBSD eyamukela le protocol